ko htike's prosaic collection: May 2010
နအဖမှ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ မဲစာရင်း ကောက်ခံခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်စီမှာမှန်း မသိပေမယ့် UK နိုင်ငံမှာတော့ မဲစာရင်းကောက်ခံကြောင်း သံရုံးမှ စာပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။
အတည်ပြုလို့ မရသေးတဲ့ သတင်းတချို့အရ အထက်ပါစာရွက်တွင် လက်မှတ်ထိုးထားသော သီတာအောင်ဆိုသော အမျိုးသမီးမှာ သန်းရွှေသမီး(စိန်စီသောည ဗီဒီယိုဖြင့် နာမည်ကြီးလာသူ)၏ ခယ်မ(သို့) မရီး တော်စပ်သူဟု သိရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 21:22 42 comments
ရန်ကုန်မြို့မှ မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၂၀ ခန့်က ဆေးဝါး နှင့် ပရိဘောဂ ရောင်းသည့် အပေါ်ဆုံးထပ်တွင် အစပြု လောင်ကျွမ်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု အခါ ဈေးတခုလုံး လောင်ကျွမ်းသွားသည်ဟု ရန်ကုန်မှ လာသော သတင်းများအရ သိရသည်။
(photo and news: moemaka)
Posted by ကိုထိုက် at 09:07 1 comments
သန်းရွှေအား ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တကျွန်းနှင့် သေဒဏ် ချမှတ်
Posted by ကိုထိုက် at 10:542comments
ထိုင်း ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့ မြန်မာ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုတို့ ကွာခြားချက်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ အာဏာ သိမ်းတာနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူလူချင်း သတ်လို့ သေကြတယ် ဆိုတာတော့ မကောင်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုလို ဆန္ဒပြတာကို စစ်တပ်က ဖြိုခွဲတာခြင်း အတူတူ မြန်မာပြည်က ၂၀၀၇ သံဃာတွေ လမ်းလျှောက် မေတ္တာပို့တာကို ဖြိုခွင်းတဲ့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတော် အစိုးရ ကိုင်တွယ်ပုံတွေ ကွာခြားပုံကို ကျွန်တော် အခု စာမှာ တင်ပြပါ့မယ်။ အစိုးရဆိုတာနဲ့ အာဏာရူးနေပြီး အာဏာကို ဖြတ်လမ်းက ရယူထားတဲ့ စစ်အုပ်စု ကွာခြားပုံက ဆီနဲ့ ရေ လိုဖြစ်လို့ပါပဲ။ မြန်မာပြည်က စစ်သားဆိုတဲ့ မျက်စိပိတ်ပြီး ကုန်းအော်နေတဲ့ လူအချို့ နား၊မျက်စိ ပွင့်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
(ကျွန်တော် အရင်ကလည်း စစ်သား ပီသတဲ့ ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဆွန်သီနဲ့ အာဏာကို အာသာငမ်းငမ်း ဖြစ်နေတဲ့ သန်းရွှေ တို့ အာဏာသိမ်းထားတာခြင်း အတူတူ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ခြင်း အတူတူ သိက္ခာရှိသူနဲ့၊ အကျင့်ပျက် အရှက်မရှိတဲ့ သန်းရွှေ လုပ်ရပ် ကွာခြားပုံကို တင်ပြထဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။)
ထိုင်းမှာ ရှပ်နီတွေ ဆန္ဒပြပုံကို အရင်ပြောပြပါမယ်။
ရှပ်နီတွေဟာ များသောအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ဆင်းရဲသား များတဲ့ ဒေသကနေ လာရောက်ဆန္ဒ ပြကြသူတွေများပါတယ်။ ဘန်ကောက် မြို့ခံက နည်းပါတယ်။
အရင် လာဘ်စားလို့ ပြုတ်သွားတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို ထောက်ခံသူတွေများပါတယ်။ သက်ဆင်က အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းတရားရုံးက လဘ်စားမှုနဲ့ သက်ရှင်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တဝက်သိမ်း၊ တဝက်ပြန်ပေးဖို့ အမိန့်ချပြီးနောက်မှာ အခု ရှပ်နီတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
မပြေးသော် ကန်ရာရှိ ဆိုသလို .. ဒီဆန္ဒပြပွဲကို သက်ဆင်က နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ကိုင်၊ မကိုင်ကိုင် အများ အမြင်မှာတော့ သက်ဆင်က ကြိုးကိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သက်ဆင်ဟာ ဥပဒေအရ လာဘ်စားမှု ထင်ရှားလို့ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရတာကို ရှောင်ပြီး တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ရာဇဝတ်သား သက်ဆင်ရဲ့ တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်အောင် လုပ်မှုမှာ ရှပ်နီတွေက ဝင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပေးရတာ ဖြစ်လာတယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ အာဆီယံ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ သိက္ခာ မရှိမှု၊ အကျင့် စုတ်ပျက်သက်နေမှုကို တခါတည်း ပြောချင်ပါတယ်။ သူများနိုင်ငံက ရာဇဝတ်မူကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရာဇဝတ်သားကို ပိုက်ဆံတွေ ပါလာတာကြောင့် ကဗ္ဘောဒီယားက ဟွန်ဆင်က နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး အကြံပေး ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ ရာဇဝတ်အမှု အခင်း ရှင်းလင်းမှု မရှိသေးသူကို နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး အကြံပေး ခန့်တဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကလည်း အတော့်ကို သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။)
၁။ ရှပ်နီတွေဘက် ပြန်ဆက်ရရင် ... ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုတဲ့ ရှပ်နီတွေက အစကတည်းက နိုင်ငံရေး တောင်းဆိုချက်တွေ တောင်းဆိုပြီး ဆန္ဒပြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ အသစ် ကျင်းပရေး
ပြည်သူ့ အစိုးရသစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေး
စတာတွေ တောင်းဆိုပြီး လူ သောင်းချီပြီး ဘန်ကောက်မှ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သံဃာတော်တွေက အစိုးရ ဖျက်သိမ်းရေးတောင် မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး
သံဃာတော်များကို ဝန်ချ တောင်းပန်ရေး
ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု ကို ဖြေရှင်းပေးရေး
စတာတွေ တောင်းဆိုပြီး သံဃာတော်တွေ သိန်းချီပြီး တနိုင်ငံလုံးအနှံ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့တာပါ။
၂။ ထိုင်း ရှပ်နီတွေက ဘန်ကောက်မှာ လမ်းတွေ ပိတ်ပြီး သပိတ် စခန်းဖွင့်ပါတယ်။ စီးပွားရေးတွေ ရပ်တန့်ကုန်ပါတယ်။
မြန်မာ သံဃာတော်တွေက သပိတ်စခန်း မဖွင့်ခဲ့ပါဘူး။ စီးပွားရေးတွေ မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
၃။ ထိုင်း ရှပ်နီတွေ တောင်းဆိုတာကို ထိုင်းအစိုးရက လက်ခံစကားပြောပြီး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ တီဗွီကနေ ရှပ်နီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတာကို တိုက်ရိုက် ပြသခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က စစ်အုပ်စုကတော့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဘာမှ မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူး။
၄။ ထိုင်းအစိုးရက တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး ရှေးရှုပြီး ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာ လျော့ပေးခဲ့တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ရှပ်နီတွေက မကျေနပ်ခဲ့ပါဘူး။
ြုမန်မာပြည်က စစ်အုပ်စုက တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု အခက်အခဲတွေကို ဘာမှ မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ မိမိ ကောင်းစားရေး၊ အာဏာကို ဖြတ်လမ်းကနေ တည်မြဲရေး ကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်မျက်နှာကို မထောက်ဘဲ အလျော့မပေးခဲ့ပါဘူး။
၅။ ထိုင်းအစိုးရက ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြန်သွားဖို့၊ အကြမ်းမဖက်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောပါတယ်။ အဲလို အတွက် လူစုခွဲဖို့ အိမ်ပြန်ဖို့ ပြောပြီး၊ မပြန်ရင် လက်နက်သုံး ဖြိုခွဲရပါမယ် ပထမအကြိမ်မှာ ကြေငြာတာ ၁ ပတ် ကျော် ကြာပါတယ်။ ရှပ်နီတွေက မပြန်ခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာ စစ်အုပ်စုက လူစုခွဲပါ မခွဲရင် ပစ်မယ် ပြောပြီး အချိန် ၁၀ မိနစ် ပေးတယ် ပြောပါတယ်။ ဒီနောက် အကြမ်းမဖက်တဲ့ သံဃာတွေကို အကြမ်းဖက်ပြီး ပစ်သတ်ပါတော့တယ်။ (စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းလွှတ်လို့ ကျောင်းသား ၁ ထောင်လောက် ထွက်လာရင်တောင် လူစုခွဲပြီး ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ကြတာ ၁၀ မိနစ်မက ကြာပါတယ်။)
၆။ ထိုင်းအစိုးရက ပထမ အကြိမ် သေနတ်သုံး ဖြိုခွဲပေမယ့် ၂ ဖက် ပြန်ပစ်တာတွေရှိပြီး ဆန္ဒပြသူတွေရော စစ်သားတွေရော သေခဲ့ပါတယ်။ ၂ ဖက် တိုက်ခိုက်ကြတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ သံဃာတော်တွေက ပြန်ပြီး မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ သံဃာတော်တွေပဲ သေပါတယ်။ စစ်သားတွေ ဒဏ်ရာတောင် မရခဲ့ပါဘူး။
၇။ ထိုင်း အစိုးရက ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်ညှိနှိုင်းပါတယ်။ ထပ်ပြီး အလျော့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှပ်နီတွေက အဓိက နိုင်ငံရေး တောင်းဆိုမှုတွေကို ရခဲ့ပြီး လက်ခံခဲ့ပေမယ့် အရေးမပါတဲ့ အသေးအဖွားကိစ္စ အကြောင်းပြပြီး အိမ်မပြန်ခဲ့ပါဘူး။
အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုက မြန်မာ သံဃာတော်တွေ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှု ဒီနေ့အထိ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါ။
၈။ ထိုင်းအစိုးရက ဆန္ဒပြတာတွေ ရပ်ပြီး အိမ်ပြန်ကြပါ။ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လုပ်သွားပါမယ် ပြောတယ်။ ရှပ်နီတွေက မရပ်ခဲ့ပါဘူး။
၉။ ဒုတိယအကြိမ် ထိုင်းအစိုးရ မရပ်ရင် ဖြိုခွဲပါရမယ်ပြောတယ်။ ၂ ပတ် အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်မယ့် လူတွေကို ကားတွေ စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ကြက်ခြေနီတွေကို ဝင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ သတင်းသမားတွေကို ဝင်ခွင့်ပေးပါတယ်။
အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုက တကြိမ်တည်းမှာ ၁၀ မိနစ်ပေးခဲ့ပြီး လမ်းတွေကို ပိတ်ကာ မြန်မာ သံဃာတော်တွေ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ခြေနီ၊ သတင်းသမား ဘယ်သူ့ကိုမှ ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။
၁၀။ ထိုင်းရှပ်နီတွေက အိမ်တွေ၊ ကုန်တိုက်တွေ၊ ကားတွေ၊ ဘဏ်တွေကို မီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်း ဖက်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။
သံဃာတော်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေက ဘာမှ မဖျက်ဆီးခဲ့ပါဘူး။ အကြမ်းမဖက်ခဲ့ပါဘူး။
၁၁။ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြိုခွဲခံရ အပြီးမှာ ရှပ်နီခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ ထိုင်းအစိုးရက ရွေးချယ် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခြား ပါဝင် ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ကားတွေ စီစဉ်ပေးပြီး အိမ်ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ အခု အထိ အဖမ်းခံရသူ ၁၀၀ မပြည့်သေးပါဘူး။
မြန်မာစစ်အုပ်စုက ဆန္ဒပြ သံဃာတွေအနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လမ်းဘေးက ကွမ်းယာသည်တောင် မချန်ပါဘူး။ အကုန် ဖမ်းပါတယ်။ လူ ၆၀၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီး ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
၁၂။ ရှပ်နီတွေ ဆန္ဒပြတဲ့ စုစုပေါင်း ၂ လ ကျော် ကာလ အတွင်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၀၀ မကျော်ခဲ့ပါဘူး။ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၁၀၀ မကျော်ခဲ့ပါဘူး။ သေဆုံးသူတွေမှာ စစ်သားတွေ ပါခဲ့ပါတယ်။
သံဃာတော်တွေ မေတ္တာပို့ တောင်းဆိုရာမှာ သံဃာတော်များနဲ့ လူအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကို အာဏာရှုး စစ်အုပ်စုက ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်သား တစ်ယောက်မှ မသေခဲ့ပါ။ လူ ၆ ထောင်ကျော် ဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ဒီနေ့အထိ လူ ၅၀၀ ကျော် ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံနေရပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထက်ပါ အချက်တွေကတော့ ထိုင်း ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့ မြန်မာ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုတို့ ကွာခြားချက်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။
(နောက်ပိုင်းမှာလည်း ထပ်မံပြီးကွာခြားချက်တွေ အချိန်နှင့်အမျှ ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။)
Posted by ကိုထိုက် at 09:58 1 comments
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အဓိက ကြတဲ့ မေးခွန်းများ
မေး။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် အနိုင်ရတဲ့ ပါတီက ခေါင်းဆောင် (သို့) လူထု ကိုယ်စားလှယ်က နိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာကို စီရင်နိုင်မယ့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ သမ္မတ ဖြစ်လာမှာလား။
ဖြေ။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အနိုင်ငံရတဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်(သို့) လူထု ကိုယ်စားလှယ်က နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ သမ္မတ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
လူထု ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်တဲ့လူ၊ ပြည်သူက ရွေးကောက်တာ မဟုတ်တဲ့လူ .. အဲဒီ လူကသာ သမ္မတ ဖြစ်လာမှာပါ။
မေး။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး လွှတ်တော်မှာ အတိုက်အခံပါတီ အနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ အမှားအယွင်းရှိတာကို ထောက်ပြ၊ ဝေဖန်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ အကြံပြုနိုင်မလား။
ဖြေ။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး လွှတ်တော်မှာ အတိုက်အခံပါတီ မရှိပါ။
အတိုက်အခံပါတီ မရှိတာကြောင့် သမ္မတ ပြောသမျှ ခေါင်းညိမ့်ပြီး အချိန်တန် အိမ်ပြန်လာရသော ပါလီမာန် အမတ်များသာ ရှိနေပါတော့မည်။ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ မပြောနိုင်ပါ။ လူထုက ရွေးချယ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ သမ္မတ ခိုင်းတာသာ လုပ်ရပါမည်။ တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက် ဖျက်ဆီးရာတွင် တထောင့်တနေရာက ပါဝင်ကြရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ ရာထူးအကြီးတွေကို လက်ခံရတဲ့ ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေက မိခင်ပါတီ၏ ရပ်တည်ချက် ပေါ်လစီတွေကို အကောင်အထည်ဖေါ် နိုင်မလား။
ဖြေ။ ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေ အစိုးရ အဖွဲ့ထဲ ပါသွားရင် မိခင် ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီရပ်တည်ချက်၊ မူဝါဒတွေကို ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
မေး။ ပါလီမာန်ကနေ အထက်ပါ မကောင်းသော အဓိကကျသည့် အချက်များကို ပြဌာန်းထားသည့် ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ၇၅ % ကျော် သဘောတူမှသာ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ၂၅ % ဖြစ်သော ပြည်သူက ရွေးကောက်ထားခြင်း မရှိသည့် စစ်သား တမတ်သားက သဘောမတူလျှင် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ... လုံးဝ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသော ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံ ဥပဒေသာ ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာထက်၊ ... အမျိုးသား ညီလာခံတွင် အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲချိန်က .. ပြင်ဆင်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သော ၇၅% ကျော် ဆိုသော စကားလုံးတွင် ... ကျော် ... ကို ဖြုတ်ပြီး ၇၅% တွင် ထားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာတွင် လုံးဝ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဟု ညီလာခံတတ်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်များ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူလကတည်းက ပြင်ဆင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိသော အခြေခံဥပဒေသာ ဖြစ်ပါသည်။
ပါလီမာန်တွင် ဝင်ရောက်ပြီး အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟု ပြောဆိုချက်များမှာ ကျောက်ဆောင်ကို ကြက်ဥနှင့် ပေါက်၍ ဖြိုရန်ကြံနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 12:45 1 comments
တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ကိုပေတရာ ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိတယ်တဲ့။
အဲဒီ ကိုပေတရာမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ သူ့အကျင့်က ဘာမဆို လက်တွေ့မဟုတ်ရင် လက်ခံလေ့မရှိဘဲ၊ ကိုယ်တွေ့၊ လက်တွေ့မှ ယုံကြည် လက်ခံတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့။
ဒါကြောင့်ပဲ သူ့ကို ရွာမှာ "သေချာတဲ့ ပေတရာ" ဆိုပြီး နာမည်တွင်နေတော့တာပါပဲ။
ညနေခင်း တစ်ခုမှာ ရပ်ရွာအရေး အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ရွာဦးကျောင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အပြန်မှာ အခြားလူတွေနဲ့ အတူ မပြန်ဘဲ .... မြန်မယ် ထင်တဲ့ ဖြတ်လမ်းကနေ အခြားရွာသားတွေ အားလုံးနဲ့ ခွဲထွက်ပြီး ကိုပေတရာ တစ်ယောက် အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အပြန်လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်လာရင်း လမ်းပေါ်မှာ ခွေးချေးပုံလို့ ထင်ရတဲ့ အပုံတစ်ခုကို တွေ့လိုက်တော့ ..... ကွေ့ရှောင် ခွကျော်ပြီး ဆက်လျှောက်သွားမယ်ပေါ့။ အဲ .. ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မဟုတ်ရင် မယုံတဲ့ ဗီဇက ပေါ်ထွက်လာတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကတုန်းကတော့ ဒီရွာ၊ ဒီလမ်းမှာပဲ ကိုပေတရာက အခုလို မှောင်ရီပျိုးပြ အချိန်မှာ ခွေးချေးပုံ တစ်ခုကို သတိမထားမိလိုက်လို့ တတ်နင်းမိခဲ့သေးတယ်။ ကိုပေတရာတင် မကပါဘူး၊ အဲဒီ အချိန်က သူနဲ့ အတူ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ အခြားရွာသားတွေပါ တတ်နင်းမိခဲ့သေးတာပဲလေ။ ဒီတခါမှာတော့ ခွေးချေးပုံ ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ ထဲထဲဝင်ဝင် စနစ်တကျ စုံစမ်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ အဲဒီ ခွေးချေးပုံကို သေသေချာချာ ကြည့်တယ်။ လေ့လာတယ်။ သုံးသပ်တယ်။
အလင်းရောင်က မရှိတော့တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ မက်တပ်ရပ် ကြည့်ရတာ ခွေးချေးပုံလို့တော့ ထင်ပေမယ့် မသေချာဘူး။ ဒါနဲ့ သေချာ ခါးကိုင်းပြီး ကြည့်တယ်။ လေ့လာပြန်တယ်။ သုံးသပ်ပြန်တယ်။
ခွေးချေးပုံလို့ ထင်တော့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါလည်း မသေချာဘူး။
သေချာတဲ့ ပေတရာပဲလေ။ ... သိတယ် မဟုတ်လား။ မသေချာရင် မယုံကြည်။ ဒီတော့ သေချာအောင်တော့ လုပ်ရမယ်။
သေချာမှ ကျေနပ်တာ ဆိုတော့ .... လမ်းမမှာ အဲဒီ ခွေးချေးပုံကို ကုန်းနမ်းကြည့်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ နေ့လည်လောက်ကတည်းက စွန့်သွားခဲ့တဲ့ ခွေးချေးပုံ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ နေ့အပူချိန်ကလည်း ပြင်းထားတော့ အပေါ်ယံက နည်းနည်း ခြောက်နေပုံရတယ်။ ဒီတော့ အနံ့က ထွက်ပေမယ့် ဒီလောက် မသေချာပြန်ဘူး။
သေချာတဲ့ ပေတရာ ပဲလေ။ ဒီထက် သေချာအောင် လုပ်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။ အဲလို မဟုတ်ရင် ရွာကလူတွေက ယုံကြည်စွာနဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်လုံး ယုံကြည်စွာ ပေးအပ်ထားတဲ့ သေချာတဲ့ ပေတရာ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ အလကား ဖြစ်ကုန်မှာ။ ဒီတော့ ဒီရွာသားတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကလည်း ရထားပြီးသားဆိုတော့ ကဲ .. ဒီဟာကတော့ ခွေးချေးပုံ ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် စုံစမ်းရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာကလည်း ရှိပြီးသား မဟုတ်လား။ အခြား နည်းနဲ့ သေချာအောင် စစ်ဆေးဖို့ နည်းလမ်းမှ မရှိတော့တာ။ ဒါနဲ့ပဲ ထဲထဲဝင်ဝင်ကို စုံစမ်းဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရပဲ .... သေချာအောင် ခွေးချေးပုံကို လက်နဲ့ တို့ပြီး ကလော်ကြည့်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လက်ကို နမ်းကြည့်တယ်။
ပြီးတော့ လျှာနဲ့ တို့ ကြည့်တယ်။
ဒီလို ထဲထဲဝင်ဝင် အတွင်းအထိ ဝင်ရောက် လေ့လာပြီး သကာလမှာတော့ သေချာတဲ့ ကိုပေတရာ တစ်ယောက် ခိုင်ခိုင်မာမာ သိသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ခွေးချေးပုံပါပဲတဲ့။
ဒီတော့မှ ... ဒါ ခွေးချေးပုံပဲ .. သေချာသွားပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်လိုက်တယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး သကာလ၊ လက်မှာ ပေနေတာတွေကို ခေါင်းနဲ့ ပွတ်၊ ပုဆိုးနဲ့ သုတ်ပြီး ရွာရဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း အမှောင်ထဲကနေ သေချာတဲ့ ပေတရာ တစ်ယောက် အောင်မြင်တဲ့ ချေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ အိမ်ရှိရာကို ဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ပုံပြင်ကလေးကတော့ ဒါပါပဲဗျာ။ မကြာခင် ကျင်းပမယ့် ခွေးချေးပုံ ပွဲကြီးမှာလည်း ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီး လျှာနဲ့ မတို့မိချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ .... ခွေးချေးပုံကို မြင်ရုံနဲ့တင် ခွေးချေးပုံ ဖြစ်ကြောင်း သိလာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
(စာကြွင်း .... ယခင်က ကြားခဲ့ဖူးပြီး မည်သူမည်ဝါ ရေးခဲ့ ပြောခဲ့သည် မသိသော ပုံပြင် ကျောရိုးကို ယူပြီး လက်ရှိ အချိန်ကာလနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 13:063comments
“ရဲချုပ် ခင်ရီရဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာ ဖန်တီးဇတ်မှာ သားကောင်ဖြစ်ရရှာသူ ကိုဖြိုးဝေအောင်”
ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်(၄) စစ်ဒေသမှုး ဗိုလ်မှုးကြီး အုန်းချို အပါအ၀င်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မယက ဥက္ကဌ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဗိုလ်ကြီး သန့်ဇင်သိန်း၊ ရဲမှုးများ၊ ဒုရဲအုပ်များ၊ ရယကများ၊ ကြံ့ဖွတ်များနဲ့ စစ်အစိုးရခိုင်းဖတ် လက်ပါးစေ အများအပြား သေဆုံးဒါဏ်ရာ ပြင်းစွာရခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထုတွေပါ ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကို ဘယ်သူလုပ်တာလဲလို့ ကမ္ဘာကရော မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံးကပါ စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ကျောင်းသား လူငယ်လေးတွေက အစ သေနတ်ကိုင် ပြန်တိုက်တဲ့ခေတ် (၂၂နှစ်ကာလ) မှာ ဗမာပြည်မှာ ဗုံးကွဲတာ အကြိမ်သုံးရာကျော်ပြီလို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်၊ တနှစ်ကို ဆယ့်ငါးကြိမ် ပျမ်းမျှ တစ်လတစ်ကြိမ် နှုန်းလောက် ကွဲနေသလိုမို့ ဗမာပြည်သူတွေရော၊ နိုင်ငံတကာကပါ ယဉ်ပါးနေပြီး ဗုံးကွဲတယ်ဆိုတာကို သိပ်စိတ်ဝင်တစား မရှိကြတော့တာ ကြာပါပြီ၊ တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုပြီး ဆက်အုပ်ချုပ်လို့ရအောင် သူတို့ဘာသူတို့ ခွဲတာနေမှာပါဆိုတာမျိုးလဲ ပြည်သူအများစုက သဘောထားခဲ့ကြပါတယ်၊ ခု ဧပြီလ (၁၅)ရက်၊ သကြန်အကြတ်နေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကိုတော့ သင်္ကြန်တွင်း ဖြစ်တာကြောင့်ရော၊ လူအများ အပြား ထိခိုက်တာကြောင့်ရော၊ စစ်ဘက် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိ ရာထူးကြီးကြီးမားမားပုဂ္ဂိုလ် များနဲ့ အာဏာပိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကြား ထိခိုက်မှုများတာကြောင့်ရော၊ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေရဲ့မြေး နေရွှေသွေးအောင်လာလို့ စစ်အုပ်စု အချင်းချင်းလုပ်တာလို့ အမျိုးမျိုး ပြောနေကြတာတွေကြောင့်ပါ ကမ္ဘာကရော မြန်မာပြည်သူ တရပ်လုံးကပါ စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့တာပါ။
စစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အရင့်အရင်က ဗုံးတွေနဲ့ မတူပဲ သေဆုံးဒါဏ်ရာရ စာရင်းတွေကိုချက်ခြင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သလို ဂျာနယ်တွေကနေလဲ (အာဏာပိုင် အဖွဲ့စည်းဝင်တွေ ထိပုံတွေနဲ့ အကြောင်းရာ ကလွဲရင်) ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ဖေါ်ပြခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ရက်ပိုင်းလေးမှာပဲ ဗုံးဖေါက်ခွဲသူ နှစ်ယောက်ကို သတင်းပေးရင် ဆုငွေ ဆယ်သိန်းပေးမယ်လို့ တယက ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်ပေါင်းစုံက ရယကရုံးတွေနဲ့ လူစည်ကားရာ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ် တိုင်တွေမှာ ကပ်ထားခဲ့ပါတယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် သပြေကုန်းရပ်ကွက် ဥက္ကဌက ဗုံးပစ်လိုက်တာကို မြင်လိုက်ပြီး “၀ပ်” လို့ အော်လိုက်ကြောင်း၊ ဗုံးပစ်သူတယောက်ကို နေရာမှာတင် ဖမ်းမိကြောင်း စစ်အစိုးရ စာပေစီစစ်ရေးက ခွင့်ပြုထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေထဲမှာလဲ ဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သုံးပါတ်အကြာမှာတော့ အားလုံး သိပြီးတဲ့အတိုင်း ရဲချုပ် ခင်ရီက အလွဲလွဲ အချော်ချော် သတင်းစာရှင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်၊ ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကျူးလွန်သူတယောက်ကို ဖမ်းမိ ထားတယ်ပြောပြီး VBSW, ABSDF, DAB, NCUB, KNU စတဲ့ အဖွဲ့များစွာကိုလဲ စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
ရဲချုပ်ခင်ရီရဲ့ ရှေ့နောက်မညီ အလွဲလွဲ အချော်ချော် သတင်းစာရှင်းပွဲကို သေချာ လေ့လာပြီးချိန်မှာတော့ ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကျူးလွန်သူလို့ စစ်အစိုးရ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဟာ အမှန်တကယ် ကျူးလွန်သူ ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်စရာ၊ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
နဂိုကတည်းက ယုံစရာမကောင်းလို့၊ စစ်အစိုးရ ပြောတာတွေမို့လို့ … လို့၊ စိတ်အခံကြောင့် လက်မခံတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရဲချုပ်ခင်ရီ ဆက်စပ်ပြနေတဲ့ အလွဲတွေကနေကို တွေးမိခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ ဘာကြောင့် လုပ်ကြံဇာတ် ထွင်ရသလဲဆိုတာနဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင်က ဘာကြောင့်တရားခံအဖြစ် ပြခံရလဲ ဆိုတာ ပြောစရာရှိလာပါတယ်။
အဓိက လုပ်ကြံဇာတ် ထွင်ရတဲ့အကြောင်းက သူ့တပ်သူ ထိမ်းဘို့ပါ၊ စစ်အစိုးရဟာ ဘယ်ပြည်သူဘာပြောပြော၊ ကမ္ဘာက ဘာပြောပြော ဘယ်တုံးကမှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာနဲ့ ပြည်သူတွေကို လိမ်ဘို့ဆိုတာထက် သူ့တပ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရှင်းဘို့၊ အာဏာရှင်သန်းရွှေနဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိတဲ့ သူ့တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ပြန်လိမ်တာပါ။
X2O ရေကစား မဏ္ဍပ်ဟာ စစ်အုပ်စု ရာထူးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ သားသမီးတွေ စုဝေးရာ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေရဲ့ အချစ်တော်မြေးလေး ဖိုးလပြည့် (ခေါ်) နေရွှေသွေးအောင် ပါလာသွားနေခဲ့ပါတယ်၊ အမှတ်(၄) စစ်ဒေသမှုးဗိုလ်မှုးကြီး အုန်းချိုက သူ့အပိုင် စစ်ဒေသမဟုတ်ပဲ ဖိုးလပြည့်နဲ့ VIP သားသမီးများ လုံခြုံရေးအတွက် သီးသန့် လာစောင့်ပေးနေရတာပါ၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ၀င်ထွက်ခွင့် တံဆိပ်ပါ ကားတွေရပ်ထားပြီး ဗိုလ်မှုးကြီးကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေးယူပေးနေတာမို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရဲမှုးနဲ့ မယက ဥက္ကဌအပါအ၀င် လုံခြုံရေးများစွာ ရှိနေတဲ့ကြားမှာ ကွဲခဲ့ထိခဲ့တာကြောင့် အချင်းချင်း ပြန်ယိုးစွပ်စရာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်၊ ဖိုးလပြည့်ကို မကြည်တဲ့ တပ်တွင်းအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ တခြား VIP သားသမီးတချို့ကို မကြည်တဲ့ တပ်တွင်း အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဗိုလ်မှုးကြီး အုန်းချိုကို မကြည်တဲ့ တပ်တွင်း အသိုင်းအ၀ိုင်း တခုခုက လုပ်တာလို့ သူတို့ အချင်းချင်းကြားမှာကို ထင်ကြေးတွေ ယူဆချက်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ၊ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလထဲမှာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ချယ်ရီဥယျာဉ်အိမ်ယာက နေပြည်တော်တိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ် ဝေလွင်နေအိမ်နဲ့ နယ်စပ်စည်ပင် ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီး တင်ငွေ နေအိမ်တွေမှာ ချိန်ကိုက်ဗုံးတွေ တွေ့ခဲ့ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပဲ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်၊ (သုံးလကျော်ကြာပြီးမှ ခု သတင်းစာ ရှင်းပွဲမှ ထုတ်ပြောတာပါ)။
ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အရာရှိကြီးတွေသာ သိခဲ့ပြီး ချယ်ရီဥယာဉ် အိမ်ယာကို ဆောက်နေတဲ့ ဆာကူရာဆောက်လုပ်ရေးက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေကိုတောင် အဲဒီ ၀န်းထဲမှာပဲ ကြိတ်ပြီး စစ်ခဲ့ပါတယ်၊ တယောက်နဲ့ တယောက် လေးစားမှုမရှိပဲ အကျိုးခံစားမှုတွေနဲ့၊ အမိန့်အာဏာတွေက ပေါ်နေ ပါတ်သက်နေ ကြတဲ့ အသိုင်းဝိုင်းဖြစ်တာကြောင့်၊ သတင်းလုံခြုံမှုမရှိပဲ ပေါက်ထွက်လာပြီး ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေကနေ ပြောမှ သိကြရတာကြောင့် တပ်တွင်းမှာပဲ အချင်းချင်း ပြန်လုပ်နေသလား၊ တယောက်ကို တယောက် မယုံသင်္ကာနဲ့ ကြည့်နေခဲ့ကြတာမှာ၊ သင်္ကြန် ဗုံးပေါက်မှုဟာ ပြဿနာ ပိုကြီးစေခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေအပါအ၀င် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကြားမှာ မလုံမခြုံ ဖြစ်လာပြီး ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး မကြာမှီ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ နေပြည်တော် သွားလာခွင့် ကန့်သတ်လိုက်တာ၊ လူအင်အား လက်နက် အင်အားစာရင်း ကြိုသတင်းပို့ရမှာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
သို့လောသို့လောနဲ့ အချင်းချင်း မယုံမကြည်ဖြစ်လာတဲ့ တပ်တွင်း ပဋိပက္ခကို ထိမ်းဘို့၊ မျက်မာန်ရှနေတဲ့ အာဏာရှင်ကြီး သန်းရွှေကို နှစ်သိမ့်နိုင်ဘို့၊ စောက်သုံးမကျသလို ဖြစ်နေတဲ့ ရဲနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ သိက္ခာကိုကာကွယ်ဘို့၊ ပြည်သူတွေကြားမှာ ပြောနေတဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် ခွဲတာပါကွာဆိုတာကို ရှင်းပြီးသားဖြစ်အောင်လို့၊ အတိုက်အခံတွေကို နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ရအောင်လို့ စသဖြင့် အကြောင်းရာတွေကြောင့် လုပ်ကြံဇာတ် ထွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရဲချုပ်ခင်ရီရဲ့ အကြံပေး ဇတ်လမ်းရေးဆရာတွေရဲ့ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်မှုမှာ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ရတာက ကိုဖြိုးဝေအောင်ပါ၊ ဘာကြောင့် ကိုဖြိုးဝေအောင်က တရားခံ အဖြစ်ပြခံရလဲဆိုတာက ဇတ်လမ်း ဖန်တီးလွယ်မဲ့ ဆက်စပ်မှုမှာ ရှိနေလို့ပါ၊ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဟာ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလက ဗုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော် တိုင်းမှုးအိမ်ရှိရာ ချယ်ရီ ဥယျာဉ်အိမ်ယာမှာ လျှပ်စစ် တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် လုပ်ခဲ့ဘူးသူ တယောက်ဖြစ်ပြီး သံသယဖြစ်ဘို့ ကောင်းသူတွေနဲ့ တချိန်က တရင်းတနှီး နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီဗုံးကိစ္စမှာ စစ်မေးခံဘူးသူ၊ ထောက်လှမ်းရေးတွင် ခံဝန် လုပ်ထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ သင်္ကြန်အပြီး ပြစ်ချက်ဟောင်းရှိသူ သံသယဖြစ်စရာ အားလုံးကိုဖမ်းတာမှာ ပြန်အဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ချယ်ရီဥယျာဉ် အိမ်ယာဝန်းထဲမှာ အလုပ်သမားတွေ ရှေ့မှာ စစ်ဆေးတာမျိုး မဟုတ်ပဲ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု မျိုးစုံနဲ့ စစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်က နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပါယ်ကသူတွေနဲ့ ပါတ်သက်ခဲ့တာတွေကို ပြောပြဖြစ်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ (ဥပမာ) ၁၉၉၉ ခုက တောင်ကြီးမြို့၊ အေးသာယာ ဂျီတီအိုင်မှာ ကိုးလေးလုံး အရေးအခင်း အတွက်စာဖြန့်တယ်ဆိုပြီး ဌာနမှုးနဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးရှေ့မှာ နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ကျောင်းတက်ပါမည် ဟု ၀န်ခံ လက်မှတ်ထိုးဘူးကြောင်း၊ ၂၀၀၇ သြဂုတ်လကုန်က ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၁၉ နှစ်ပြည့် အခန်းအနားနှင့် လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းတက်မှုကြောင့် မင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ လမ်းလျှောက်ပွဲ VCD အခွေအား ကိုယ်တိုင် ကူးကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း၊ သံဃာတော်များအား ထောက်ခံသင့်ကြောင်း စာကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကြား ကိုယ်တိုင် ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ ငွေကြာယံ ဘုန်ကြီးကျောင်းကို ထရန်စဖေါ်မာ ဆင်ပေးနေချိန်ဖြစ်၍ ၄င်းသံဃာတော် များနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်စဉ် လိုက်ပါခဲ့ကြောင်း၊ အတူလုပ်ခဲ့သူများမှာ ၂၀၀၇ ပြီးနောက်တွင် ထိုင်း နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းများ ပြောပြဖြစ်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူလထဲက လက်တွေ့ ကျူးလွန်သူတွေကို မဖမ်းနိုင် မဖေါ်ထုတ်နိုင်လို့ တရားခံအစားထိုးဘို့ ကြံစီနေတဲ့ ရဲချုပ်ခင်ရီနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအုပ်စုဟာ ဖြိုးဝေအောင်နဲ့ တခြားစွပ်ဆွဲသူတွေကို ဇွတ် ဆက်စပ်ရပါတော့တယ်၊ တခြား စွပ်ဆွဲခံရသူတွေကို ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်တာ ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်သူမှမပြော နိုင်ပေမဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင်ရဲ့ ဇနီးကတော့ ဆာကူရာမှာ တုံးကထဲက အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုမျိုးကြီး (ခေါ်) ကိုမျိုးမြင့်အောင် (B.E Civil) က ရန်ကင်းစင်တာက သံပန်းလုပ်ငန်းနဲ့ ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းကို သင်္ကြန်တွင်း အပြီး လုပ်ပေးမယ် လက်ခံခဲ့တာကြောင့် နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီး နေ့/ည လုပ်နေကြောင်း၊ သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေ့)က တနေ့လုံး ရန်ကင်းစင်တာမှာပဲ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုမျိုးကြီး၊ အလုပ်သမားများနှင့် ရန်ကင်းစင်တာမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၊ လုံခြုံရေးများလဲ သိကြောင်း၊ လာဖမ်းသွားပြီး နောက်နေ့တွင် ကိုမျိုးကြီးက မေးသဖြင့် သင်္ကြန်ဗုံးကိစ္စ စစ်မေးရန် ခေါ်သွားကြောင်းပြောရာ ငါနဲ့အတူရှိနေတာပဲ၊ သူနဲ့မှမဆိုင်တာ၊ ဒါဆိုပြန်လွတ်လာမှာပါ ပူမနေနဲ့ ပြောကြောင်း၊ ကျွန်မ အမျိုးသားက မတရားစွပ်ဆွဲခံရတာပါလို့ RFA ကို ပြောသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ခုဆိုရင် ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို အင်းစိန်ထောင် စစ်ခွေးတိုက်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပြီး၊ ၁၁.၅.၂၀၁၀ အင်္ဂါနေ့က မိခင် ဒေါ်မာမာဆွေနဲ့ ညီဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ထက်ဝေအောင်တို့ ၁၅ မိနစ် တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်၊ ဒေါက်တာ ထက်ဝေအောင်က သူ့ အကိုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုး လုပ်ခံထားရပုံပေါ်နေပြီး တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ (၁၅)မိနစ်မှာ အကြောင်းရာလေးမျိုးကိုပဲ ထပ်ကာထပ်ကာ ပြောနေခဲ့တယ် လို့ပြောပါတယ်။
အဓိကကတော့ သူမ တရားခံရတာဖြစ်ကြောင်း၊ လုံးဝမပါတ်သက်ကြောင်း ပြောတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ဇနီးဖြစ်သူ မဌေးဌေးက ရှေ့နေဦးကျော်ဟိုးကိုငှားရမ်းထားပြီး ကိုယ်စား လှယ်လွှဲ ရှေ့နေပါဝါယူဘို့ အင်းစိန်ထောင်ကိုသွားခဲ့တာမှာ ကိုဖြိုးဝေအောင်နဲ့ တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပဲ ထောင် အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ဘက်က လက်မှတ်ထိုးလုပ်ပေးရမဲ့ဟာ လုပ်ပေးထားပြီးပြီ၊ SB က ခွင့်မပြုသေးလို့ဟု ပြောကြောင်း၊ သူ့အမှုလိုက် သက်တမ်းမှာ နိုင်ငံရေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုး တခါမှမရှိဘူးကြောင်း VOA ကိုပြောသွားတာလဲ ကြားရပါတယ်။
အဖြေကရှင်းပါတယ်၊ ရှေ့နေပါဝါလွှဲခွင့် ပေးလိုက်ရင် ပုဒ်မ တခုခုတပ်ထားတာ ပြောရတော့မယ်၊ ထောင်ပို့ပြီဆိုကထဲက ပုဒ်မတခုခု တပ်ပို့ရတာပါ၊ ခုက မိသားစုတောင် ဘာပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲမယ်မှန်း မသိခဲ့ရဘူး ပြောပါတယ်၊ ရှေ့နေက စွပ်ဆွဲထားရာအမှု (ပုဒ်မ)နဲ့ ပါတ်သက်ပုံကို မေးလို့ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဆီက အဖြစ်မှန် သိရတဲ့အခါ ရှေ့နေက သက်သေပြလို့ရတဲ့ သူတွေကိုလိုက် ဆွေးနွေးမယ်၊ ကိုမျိုးကြီး (ခေါ်) ကိုမျိုးမြင့်အောင်(BE.Civil)နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတွေ၊ ရန်ကင်းစင်တာ က ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတွေ သက်သေဖြစ်လာရင် လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း သတင်းစာရှင်းပွဲဆိုတာ ထင်ရှားသွားမယ်၊ ဒါကြောင့် ရှေ့နေလိုက်ခွင့်မပေး၊ သက်သေပြခွင့်မပေး၊ အများပြည်သူရှေ့မှာ စစ်ဆေးမှုမပြုပဲ ဥပဒေမဲ့ တဘက်သတ် မတရားထောင်ချမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေကိ်ု ဖြေရှင်းချက်ပေးဘို့နဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပြည်သူတွေကို လိမ်ညာလှည့် ဖြားဘို့ ရဲချုပ်ခင်ရီရဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာ ဖန်တီးဇတ်မှာ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင်လို စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှာ လူတိုင်း အချိန်မရွေး သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အခြေခံအကြောင်း ရင်းဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ကြပါစို့။
Posted by ကိုထိုက် at 12:240comments
အခု ဘောင်းဘီတွေ ခဏချွတ်၊
ငါတို့ သေနတ်တွေ ခါးပုံစထဲမှာ မမြင်အောင်ဖွက်လို့
၁။ လုပ်ချင်တာတွေ ဆက်လုပ်ကြမယ်။
၃။ ရိုင်းသမျှ ကိုယ့်အတွက်ဘဲဖြစ်ရမယ်။
အခု ရင်ကျိုးခံ ခါးကုန်းစံမယ့်
ငါတို့ ခိုးလုဆောင်းရမယ့် သရဖူ
တို့ ဆက်လျှောက်မယ့် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်
အရာရာဟာ အစိမ်းနဲ့ဘဲ အယူတိမ်းရမယ်။
(Fri) 07. 05. 2010
Posted by ကိုထိုက် at 19:29 1 comments